Qoys soomaali ah oo carruuro laga qaatay oo berito loogu banaan baxayo Trollhätten | Somaliska
Magaaladda Trollhättan ee galbeedka Iswiidhan ayaa maalinta berito ah, waxaa lugu wadaa inuu ka dhaco banaanbax lugu taageerayo qoys soomaali ah oo dhawaan halkaasi lagaga qaatay afar carruur ah. Qaadashada carruurtan ayaa timid markii gabadha reerka dhalay dacwad ku soo oogtay.
Banaanbaxan ayaa soo waxaa soo qaban qaabiyey qaar ka mid ah jaaliyadaha halkaasi degan iyo dhalinyarro ka dhii dhisay falka loogaga qaatay reerkaas soomaaliyeed carruurtooda. Reerkan ilmaha laga qaatay ayaa waxaa gabadhooda oo 14 jir ahu u sheegtay xafiiska arrimaha bulshadda in waalidkeed ay dilaan islamarkaasina qorsheeynayaan in ay geeyaan magaaladda Burco, halkaana kaga soo tagaya. Gabadhan ayaa sidoo kale u sheegtay xafiiska arrimaha bulshadda in saaxiibteed oo dalkii loo kaxeeyey kuna xirriiraan facebook-fa uga sheekeysay nolosha adag ee taala dalka iyo sida iyada qudheeda loogu soo wado Burco oo loogaga sii tagayo meesha.
Reerka ilmaha laga qaatay oo xaaladaha wareer ahi ku jirta ayaa sheegaya in eeysan jirin eedeymaha gabadhooda ka sheegtay ee ah dilka iyo in dalkii loo dhoofinayo. Maxkamad la soo saaray reerka dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ayaa loogu sheegay in carruurtooda dowladda la wareegtay ka dib markii ay timid waxa ay ku sheegeen “xaalad deg deg ah” oo lama huraan aheyd in la qaato carruurta, maadama carruurtu halis ugu jirtay in la kaxeeyo xilligga fasaxa xaggaaga. Reerkan oo aan war wacaal u heeyn halka carruurtooda lugu hayo ayaa tallo ka ciirsan tahay. Hase ahaatee arrinta cajiibka leh ayaa ah sida uu Somaliska.com u sheegay mid kamid ah qaban qaabiyaasha banaanbaxa beriro lugu wado inuu dhaco in jaaliyadaha iyo masaajidkii soomaalida ay diideen siddii reerka loo gacan qaban lahaa.
Ma ahan markii ugu horeeysay ee carruuro laga qaato soomaalida Iswiidhan gaar ahaan magaaladda Trollhätten, sanadkii ina dhaafay ee 2016-ka ayaa qoys soomaali ah waxaa laga qaatay lix carruur ah, halka qaar kalena lugu raad joogo. Banaanbaxan ayaa berito waxaa uu ka dhacayaa agagaarka xarrunta xafiiska arrimaha bulshadda ee magaaladda Trollhätten. Mjdooyinkii ugu dambeeyeyna ayaa waxaa dalka Iswiidhan ku soo badanayey qaadashada carruura soomaalida oo sababo looga dhigayo dhibaato ay kala kulmaan waalidiintooda.
June 11, 2017 at 19:08
Allah Subaxaana watacaala waxaan uga baryaa inu reer kaas iyo intii kale dhibqabana dhibka kafeeydo. Caruurtodana gacaantoda ugu socaliyo aamiin aamiin aamiin.
June 12, 2017 at 07:45
Laakiin been ayaad qortay adiga nin war loo geeyey ayaad tahay mana hubsan ee xirfadii weriyenimo iyo tafatirkii la rabey inaad ku sameyso hadalka laguu sheegay ma yeelin ee been inaad qorto dadkana la wadaagto ayaad ka door biday.Waayo waxaad awoodey inaad masaajidka lagugu yiri wuu diidey la xiriirto saan markaan ku leeyahay waxaan ahay dadka magaalada degan arimahaana xog ogoolka u ah.
Hadi ow arinka masjidka ben kugu noqoto oksonow maxkamad aya lagula kora hadi ey run noqotana midaharad kale ayan ku nahay jaliyadas iyo masjidka dadka ku kharabana